Myanmar Music Art | R&B
အဆိုတော် ” Jennifer Lopez ” ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ” Ain’t Your Mama ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အားလုံးခံစားနားဆင်လို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ အဆိုတော်က မိန်းကလေးတွေဘက်ကနေ ခံစားပေါက်ကွဲထားတဲ့ သီချင်းအလန်းစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် နေရာတကာလုပ်ပေးရအောင် ကောင်လေးရဲ့ အမေ မဟုတ်ကြောင်းဘယ်သီဆိုထားလည်းဆိုတာ ခံစားနားဆင်ပါအုန်းဗျာ… 😀 😀 😀 Download Mp3 Watch MTV Favorite
Padamyar FM Radio To Live2(2016 Album)
2016 ရဲ့အသစ်ထွက် Album တစ်ချပ်ပါ….သီချင်းတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်….Original အခွေကိုဝယ်ယူအားပေးရင်းကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုကူညီကြပါ…. အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလုပ်ရယူပါ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite
အဆိုတော် ” ထက်ယံ ” ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” အဆုံးသတ် ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို အားလုံးခံစား နားဆင်လို့ ရအောင်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးနားဆင်ပေးကြပါအုန်းဗျာ…….. Mp3 ဒေါင်းယူနားဆင်ရန် Favorite
တေးသံရှင် ” သားသား ” ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းအသစ် တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ” ကျောင်းမသွားချင်ဘူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို အားလုံးခံစားလို့ ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် နှစ်သက်သဘောကျသူများအနေနဲ့ တော့ မူရင်းကိုသာ ၀ယ်ယူ အားပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ…. Mp3 Download ရယူရန် Favorite
More Than Friend – Inna
အဆိုတော် ” Inna ” ကနေ ကောင်လေးကို ဒီနေ့ အတွက် ကြားထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက်ပိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကို သီချင်းမြူးမြူးလေးနဲ့ သီဆိုပေးထားတာလေးကတော့ ” More Than Friend ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲ ခံစားနားဆင်ကြပါအုန်းဗျာ……. MTV Video ကိုဒီမှာကြည့်ပါဗျာ……… Mp3 ဒေါင်းယူနားဆင်ရန် Favorite
Start It Slow – Chris Brown
အဆိုတော် ” Chris Brown ” ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ” Start It Slow ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အားလုံးခံစားလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နားဆင်ကြပါအုန်းဗျာ….. Mp3 ဒေါင်းယူနားဆင်ရန် Favorite
ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့မျှော်နိုင်သမျှဆိုတဲ့Albumပါ….သီချင်းလေးတွေကအေးအေးလေးနဲ့အရမ်းကောင်းပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ကြပါအုံးခင်ဗျာ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ Favorite
အဆိုတော် ” Ellie Goulding ” ရဲ့ သီချင်းကောင်းတွေထဲကမှ ” Burn ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ အားလုံးပျော်ပါးဖို့ အတွက် အားလုံးကို စွန့် လွှတ်ထားခဲ့ပါ အားလုံးကို ချန်ထားခဲ့ပါ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို မြူးမြူးကြွကြွလေး သီဆိုပေးထားတော့ နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် MTV ကိုဒီမှာကြည့်ပါ Mp3 ကိုဒီမှာဒေါင်းယူပါ Favorite
အောင်ပွဲ (NLD အောင်နိုင်ရေးသီချင်း)
အောင်ပွဲ (NLD အောင်နိုင်ရေးသီချင်း) Vocalist – လူစုံ သီချင်းထဲအတိုင်းအပြတ်အသတ်အနိုင်ရအောင်…နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့မှာNLDကိုမဲပေးကြရအောင် အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ အောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းလုပ်ရယူပါ Favorite
တစ်ဖက်သက် ဆိုတဲ့သီချင်းကိုစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့စုံတွဲသီဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့ Jessica Dada ရဲ့သီချင်းအသစ်ပါ အရမ်းကောင်းပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ကြပါအုံး ဝေးနေတုန်းပဲ Vocalist – Jessica Dada Favorite
အနီးဆုံးရန်သူ – Wai La 319 views
တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် – ရွှေထူး 312 views
တုနိူင်းမဲ့ရတနာ – ထူးအိမ်သင် 235 views
အမှန်တရား – လင်းလင်း 414 views
စဉ်းစားပါ – လင်းလင်း 178 views